Posted by မြရွက်ဝေ at 3:00 PM
အမဲတွေက ငံပြာရေတွေလား မရင်နိပ်လား
လှတော့လှတယ် ဒါပေမဲ့ ကြောင်စာလောက်လေး။ ဒို့က အဲ လောက်နဲ့မဝ
စားချင်တယ်.. ဒါပေမယ့် လုပ်ရမှာ လက်ဝင်တယ်..။
ဟိုတခါတွေ့တည်းက အရန်းစိတ်ဝင်စားတာ.. တခါလောက်တော့ လုပ်ကြည့်ဦးမယ်
မြည်းချင်လိုက်တာ... အဲ့လေ.. စားချင်လိုက်တာ..း)
ဟင်းနော် ဟင်းနော်။ မသိဘူး မကြည့်ဘူး။ ကြောက်တယ်။
ကျေးဇူး ကျေးဇူး အထူးးးးးးးးးး
ဒီတခါတော့ မြန်မာလိုရေးထားလို့ ဖတ်တတ်သွားပြီ။ :D
ဟိုတခါ လင့်တွေက ဂျပန်လိုမို့လို့။
မိုက်တယ်နော်.. စားချင်စရာကြီး.. ကိုယ်လုပ်ရင်တော့ ကြက်တောင်ပံ ဘယ်နှစ်ခုလောက် ပြဲသွားမလဲ မသိဘူး။ စိတ်ရှည်တဲ့တစ်နေ့ လုပ်စားကြည့်ရမယ်..
I will try when I am back.
တော်လိုက်တာ.. အရိုးထုတ်ရတာ လက်ဝင်တယ်..
အော် တခါတလေတော့လည်း စိတ်ပါလက်ပါလေး အဲလို လုပ်ချင်မိတယ်။